नेपाली आयातकर्तालाई कोलकाता बन्दरगाहमा १ अर्ब जरीवाना मिनाहा - Yatra Daily
Home अर्थ नेपाली आयातकर्तालाई कोलकाता बन्दरगाहमा १ अर्ब जरीवाना मिनाहा
वीरगञ्ज, जेठ १७ – लकडाउनको अवधिमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले करीब रू.१ अर्ब जरीवाना मिनाहा पाएका छन् । तेस्रो मुलकबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्म ल्याइएका कन्टेनरको डिटेन्सन र ग्राउण्ड रेन्टमा आयातकर्ताले यस्तो सहुलियत पाएका हुन् ।
भारतमा जारी लकडाउनका कारण कोलकातामा रोकिएका कन्टेनर समयमा ढुवानी हुन नसकेपछि जरीवानामा मिनाहा दिइएको जानकारी कोलकाता पोर्ट ट्रष्टका अध्यक्ष विनितकुमारले दिए । अध्यक्ष विनितकुमारका अनुसार नेपाली आयातकर्ताले डिटेन्सन र ग्राउण्ड रेन्टमा रू. ९३ करोड (भारू ५८ करोड) मिनाहा पाएका छन् ।
मिनाहा रकममध्ये विभिन्न सिपिङ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने डिटेन्सन शुल्क रू. ८८ करोड र बन्दरगाहको ग्राउन्ड रेन्टवापतको रू. ५ करोड छ । भारत सरकारले लकडाउन शुरू भएको मार्च २२ देखि मे ३ तारिखसम्म आयातकर्तासँग कुनै प्रकारको जरीवाना र अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसयता मे ३१ तारिखसम्म लकडाउन बढाइए पनि यस्तो छूट दिइएको छैन । भारतले मे ३ यता लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर ढुवानी र आवागमन सहज बनाएको छ ।
कोलकाता बन्दरगाहले नेपाली आयातकर्तालाई सडकमार्गबाट ढुवानी हुने कन्टेनरमा १५ र रेलमा २० दिनसम्मको नि : शुल्क समय दिन्छ । यो समयमा कन्टेनर नलगेमा ग्राउन्ड रेन्ट तिर्नु पर्दछ । यस्तो निःशुल्क समय मार्च २२ अघि र मे ३ तारिख पछाडिका लागि गणना हुने बन्दगाह व्यवस्थापनले स्पष्ट पारेको छ ।
सिपिङ कम्पनीले १४ देखि २१ दिनसम्म निःशुल्क समय दिन्छन् । वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिएका कम्पनीले कण्टेनर फिर्ताका लागि ५ दिनको समय दिने गरेका छन् ।
यो समयमा फिर्ता गर्न नसके आयातकर्ताले कण्टेनरको डिटेन्सन शुल्क तिर्नु पर्दछ । कतिपय कम्पनीले आयाताकर्तासँगको आपसी सहमतिका आधारमा मे ३ तारिखयता पनि डिटेन्सन मिनाहा गरेको बन्दरगाहको सूचनामा उल्लेख छ ।
तेस्रो मुलुकबाट कोलकातासम्म आइपुगेका ४ हजारभन्दा बढी कण्टेनर लकडाउनका कारण त्यही रोकिएका थिए । बन्दरगाहमा कन्टनेर थुप्रिएपछि सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै व्यवस्थापनले नजिकका कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) मा पठाएको थियो ।
३० अप्रिलसम्म बन्दरगाहमा आइपुगेका कन्टेनलाई सीएफएसमा राखिएको हो । २० र ४० फीटका कण्टेनरलाई ढुवानी भाडा र व्यवस्थापन शुल्क क्रमशः भारू ६ हजार र ८ हजार तोकेर सीएफएसमा पठाइएको बन्दरगाहले बताएको छ ।
नेपाली आयातकर्ताका कन्टेनर ढुवानीका लागि १५ दिन अतिरिक्त नि ः शुल्क समय दिन सीएफएस सञ्चालकलाई निर्देशन दिइएको जानकारी अध्यक्ष विनितकुमारले दिए । १५ दिनको समयमा कन्टेनर ढुवानीका लागि पर्याप्त हुने दाबी पनि उनले गरे ।
तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि सन् २०१९ मा करीब सवा लाख कन्टेनर आएका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी कोलकाता बन्दरगाह भएर आउँछन् । बाँकी कन्टेनरको ढुवानी भारतकै आन्ध्र प्रदेशको विशखापत्तनम् बन्दरगाहबाट हुन्छ ।
Previous articleकोरोनाबाट नेपालमा ७ औँ मृत्युको पुष्टि
Next articleपर्सामा थपिए ५ नयाँ कोरोना सङ्क्रमित